Murume akatongerwa makore mashanu mutirongo nekuda kwekuparadzira COVID muVietnam
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Vietnam Kuputsa Nhau » Murume akatongerwa makore mashanu mutirongo nekuda kwekuparadzira COVID muVietnam
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau • Vietnam Kuputsa Nhau
Makore makumi maviri nemasere murume weVietnam anokanda makore mashanu mutirongo yekufamba nekuparadzira hutachiona hweECVID-28.
Kutyora COVID-19 ganhuriro kunotungamira kune yakareba mutongo wetirongo.
Vietnamese murume akabatira vanhu vasere neCOVID-8 anoenda kujeri.
Nhasi, kune vanopfuura zviuru gumi nezvitatu vakafa uye mazana mashanu nemakumi maviri ezviuru zveCOVID-13,000 kesi muVietnam.
Le Van Tri, makumi maviri nemasere akabatwa nemhosva ye "kuparadzira zvirwere zvinotapukira zvine njodzi" uye akatongerwa makore mashanu mutirongo nekutyora kwakanyanya kurambidzwa kwecoronavirus nekuparadzira hutachiona kune vamwe.
Kutongwa uye nekukurumidza kutongwa kwakaitika panguva yekutongwa kwezuva rimwe chete kuPeople's Court yedunhu rekumaodzanyemba kweVietnamese yeCa Mau.
"Tri akadzokera kuCa Mau kubva kuHo Chi Minh Guta… uye akatyora mutemo wemazuva makumi maviri nerimwe," zvakanyorwa nedare.
"Tri yakabatira vanhu vasere, mumwe wavo akafa nekuda kwehutachiona mushure memwedzi mumwe wekurapwa," yakawedzera.
Vamwe vanhu vaviri vakatongerwa muVietnam kumwedzi gumi nemasere uye makore maviri akamiswa mutirongo pamhosva imwe cheteyo.
Vietnam yanga iri imwe yenyika dzepasirose dzakabudirira nyaya nekutenda kwakayedzwa kuwanda, kutsvaga kwehukama kutsvaga, kurambidzwa kwemuganhu, uye kupatsanurwa kwakasimba. Asi masumbu matsva ehutachiona kubva mukupera kwaApril akashatisa iro rekodhi.
Ca Mau, ruwa rwekuchamhembe rweVietnam, yataura zviitiko gumi neshanu chete uye vanhu vaviri vakafa kubva denda ratanga, rakadzikira zvakanyanya kupfuura dzinoda kusvika mazana maviri nemakumi maviri ezviuru nezviuru gumi nezviuru zvishanu nezviuru zvishanu nezviuru mazana mashanu nevashanu zvevanhu vakafa munyika yekoronavirus epicenter, Ho Chi Minh City.
Zvichifambiswa nemusiyano unopfuurika weDelta, wave yechina yeVietnam yakatanga musi waApril 27. Panguva iyoyo, vanhu makumi matatu nemashanu chete ndivo vaive vafa neCOVID-35, nepo huwandu hwese hwehutachiona hwakamira pazasi pezviuru zvina. Nhasi, kune vanopfuura zviuru gumi nezvitatu vakafa, nepo kesi nhamba dziri pamusoro mazana mashanu nemakumi maviri ezviuru.
Inenge makumi masere muzana yevakafa uye hafu yehutachiona hwaitika muguta rakakura kwazvo munyika Ho Chi Minh City.
Imba kune vanhu mapfumbamwe mamirioni, Ho Chi Minh Guta rakavharirwa zvachose kubva muna Nyamavhuvhu 23, vagari vachirambidzwa kusiya misha yavo kunyangwe kunotenga chikafu.
Nezvirambidzo zvakagadzirirwa kusvika munaGunyana 15, Mutungamiriri achangobva kusarudzwa, Pham Minh Chinh akaraira kuyedzwa kukuru kwevagari veguta nemasoja akaiswa kuti asimbise kugara pamirairo yepamba uye kubatsira pakuendesa chikafu.